Olee ihe ga-enyere m aka ime ihe a niile onye nkụzi anyị nyere m mee n’ụlọ? | Ndị Na-eto Eto
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kikamba Kikongo Kinyarwanda Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Moore Myanmar Norwegian Ossetian Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Quiche Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tiv Tsonga Turkish Turkmen Twi Ukrainian Umbundu Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Olee Otú M Ga-esi Mechaa Ihe Niile A Onye Nkụzi Anyị Nyere M Mee n’Ụlọ?
Ihe ndị i nwere ike ime
Chọta ebe dị mma ị ga-anọ na-eme ha. O kwesịghị ịbụ ebe ihe ọ bụla ga-emegharị gị anya. I kwesịrị inwe tebụl n’ebe ahụ. Agbanyekwala tiivi.
Oge yiri ịnyịnya na-awụ gam gam. I kwesịrị ịmụta otú ị ga-esi na-ahazi ya nke ọma
Bụrụ ụzọ mee ihe ndị dị gị mkpa. Ebe ọ bụ na ihe ị na-amụ n’ụlọ akwụkwọ dị gị mkpa, buru ụzọ na-eme ihe ndị ahụ onye nkụzi unu nyere gị ka i mee n’ụlọ tupu i mewe ihe ndị ọzọ.
Asịkwala mgbe e mechara. Dee oge ị ga na-eji eme ihe ndị ahụ onye nkụzi unu nyere gị ka i mee n’ụlọ, ejikwala oge ahụ eme ihe ọzọ.
Hazie otú ị ga-esi eme ha. Kwuo nke ị ga-ebu ụzọ eme, kwuokwa nke abụọ ị ga-eme ma i mechaa, na ndị ọzọ. Dee ha n’akwụkwọ, deekwa oge ị ga-eji emecha nke ọ bụla. Nke ọ bụla i mechara, kagbuo ya n’akwụkwọ ahụ.
I metụ, gị ezurutụ ike. Ọ bụrụ na i mewe ihe ndị ahụ isi agbawa gị ghara ghara, kwụsịtụ, zurutụ ike. I zurutụchaa ike, mewekwa ihe ị na-eme.
Obi sie gị ike na ị ga-emeli nke ọma. Cheta na ihe na-emekarị ka nwa akwụkwọ na-eme nke ọma bụ ịgụsi akwụkwọ ike, ọ bụchaghị inwe isi akwụkwọ. (Ilu 10:4) Ị ga-emeli nke ọma n’ụlọ akwụkwọ. Gbalịsie ike, ọ ga-abara gị uru.